सुत्ने कोठाको र -्ग योजनाहरू - ठीक भित्ता पेंट र Color्ग छनौट गरेर तपाईंको निद्रा राम्रो बनाउनुहोस् - Bedroom Colour Schemes
सुत्ने कोठाको र –्ग योजनाहरू – ठीक भित्ता पेंट र Color्ग छनौट गरेर तपाईंको निद्रा राम्रो बनाउनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ बेडरूमको भित्ताको रंगको रंगले आरामको गुणस्तरलाई ठूलो असर गर्छ? एक सहज वातावरण प्रदान गर्न को योग्य हुनुको अलावा, सही बेडरूम पेन्ट र color छनौटले भावनात्मक स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ।
क्रियाकलापहरूको थकाइ दिन पछि आराम गर्ने ठाउँको रूपमा बेडरूम यसको मुख्य कार्यको रूपमा, यो महसुस नगरीकन पनि हामी यस्तो ठाउँ हुन्छौं जहाँ हामी ‘भावनात्मक थकान’ घटाउँछौं, वा किताब पढ्ने वा टेलिभिजन हेर्ने ठाउँ कम गरिरहनुपर्दा। अरूले चिन्तित
दुर्भाग्यवस, धेरैले आफ्नो बेडरूममा लागू गर्नको लागि सही भित्ता र paint रंगको छनौट गर्न कसरी बुझ्दैनन्। अधिकतर, छनौट गरिएको रaमनपर्ने / मनपर्ने रंग वा सफा वा उज्यालो कारणको साथ सेतो हो। वास्तवमा, प्रत्येक र colorको फरक फरक प्रभाव हुन्छ। सही नभएको र colors्गको छनोटले बोरियतलाई निम्त्याउन सक्छ, मुड गिरावटलाई असर गर्दछ, र तपाईंलाई विश्राम गर्न असक्षम बनाउँदछ किनकि रंगहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रोत्साहित गर्दछन्।
बेडरूम वाल पेन्टका लागि सिफारिश बेडरूम रंग योजनाहरू
निम्न बेडरूम रंगहरू छन् जुन हामीले तपाईंलाई अधिक शान्त र आरामसँग आराम गर्न मद्दत गर्न रोज्यौं।
बेडरूम रंग योजनाहरू # १: हरियो
हरियो रंगले बढी प्राकृतिक कोठाको छाप दिन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ ताकि यसले कोठामा सकारात्मक वातावरण प्रदान गर्न सक्दछ। प्राकृतिक रंगहरू, जस्तै पातहरू, घाँस, हिमाली वातावरणसँग सम्बन्धित रंगले कोठाको वातावरणलाई अधिक रमाइलो र आराम दिन्छ।
पात हरियो, हल्का हरियो वा खैरो-हरियो छनौट गर्नुहोस्। यस भित्तामा रंग र शान्त र अस्पष्ट रंगले शान्त गराउनु बाहेक मानव मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्न मद्दत गर्दछ जब म बिउँझन्छु। नतिजा एक अधिक आरामदायी निन्द्रा हो र उठेको पछि आलस्य कम गर्दछ र तपाईं ताजा र बढी ऊर्जा महसुस गर्दछ।
बेडरूम रंग योजनाहरू # २: निलो
हरियो बाहेक, तपाई निलो रंग को रूप लाई चुन्न सक्नुहुन्छ जुन प्रकृति लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। हल्का निलो, खरानी-नीलो वा नीलो नीलो रंगले तपाईंलाई समुद्रको किनारमा लैजान्छ। यस रंगले बोकेको प्राकृतिक, सफा, चम्किलो, र शान्त प्रभावले तपाईंको निद्रा राम्रो बनाउँदछ।
हरियो जस्तै, निलो संग भित्ता र paint रंग को कार्यान्वयन पनि एक सकारात्मक वातावरण प्रदान गर्न सक्छ। यद्यपि उन्नयन गर्न सकिने र inहरूमा समावेश गरिएको, निलोले चिसो छाप ल्याउँदछ ताकि तपाईं सजिलै निदाउन सक्नुहुन्छ।
बेडरूम रंग योजनाहरू # 3: बेज
बेज, जुन खैरो र सेतोको संयोजन हो, नरम र शान्त रंगमा समावेश छ। यस र्गले व्यक्तिलाई शान्त र आरामदायक महसुस गराउँदछ त्यसैले उनीहरू राम्ररी आराम गर्न सक्दछन्। यस र colorको तारा होटलहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी पाहुनाहरूलाई घरमा पाहुना बनाउनु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन।
बेडरूम रंग योजनाहरू #:: खरानी
काठको भुइँहरूसहित भित्ताहरूमा खरानी र colorलाई जोड्नुहोस्, त्यसपछि कोठा जसले न्यानो र आरामदायी महसुस गर्दछ तपाईंको आरामको गुणस्तर सुधार गर्दछ। गतिशील र आधुनिक र colorsहरूमा समावेश भएता पनि, यो र color्गलाई तपाईंको बेडरूम पेन्टको रंगको रूपमा छनौट गर्दा विशाल र स्वच्छको छाप दिन सक्छ। यो सानो बेडरूम को लागी उपयुक्त छ।
अब, कुन चाहानुहुन्छ भित्ताको पेन्टको र you्ग तपाईले रोज्नु हुन्छ? ओ हो, यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि शयनकक्षमा आरामदायी वातावरण प्राप्त गर्न, त्यसो भए पहिले कुरा भनेको बेडरूमको भित्ताको र adjust्ग सहि रंगको चयनको साथ समायोजन गर्नु हो। धेरै गाढा र रंगहरूलाई प्रहार गर्नुहोस् किनभने यसले प्रतिकूल प्रभाव पैदा गर्दछ।
शयनकक्ष रंग योजनाको साथ आरामदायक बेडरूम बनाउनको लागि स्मार्ट सल्लाहहरू
सुत्ने कोठाको र Sche्ग योजनाहरू थाहा पाउनु भन्दा पहिले स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो, पहिले तलको आरामदायक बेडरूम सिर्जना गर्ने सल्लाहहरू जान्नुहोस्। आरामदायी कोठामा निश्चित रूपमा एउटा भित्री छ जुन सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको हो, र paintको रंग र फर्नीचरको चयन सहित। यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन आरामदायक कोठा बनाउनको लागि लागू गर्न सकिन्छ।
र colorsहरू छनौट गर्नुहोस् जसमा शान्त प्रभाव हुन्छ ताकि उनीहरूले तपाईंलाई जागा रहन र अनिद्रा अनुभव गर्न सकेनन्।
एक व्यापक छाप दिनुहोस्, कोठा वास्तव मा एक आकार छ जुन धेरै ठूलो छैन।
कोठामा र paint र color र फर्निचर बिच सहि मिल्दो छनौट गर्नुहोस्। तटस्थ र colorsहरू जुन सबै र colorsहरूसँग मेल खान्छ यो उत्तम छ।
कोठामा धेरै सामानहरू नराख्नुहोस्। आईटमहरू छनौट गर्नुहोस् जुन कार्यशील छन् र कोठामा आवश्यक छ।
जब तपाईं बिहान उठ्नुहुन्छ, पहेंलो रंगले तपाईंलाई अधिक उत्साहका साथ दिन सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। यो रंगले तपाईंलाई तनावबाट पनि बचाउँछ। नरम पहेंलो रंग छनौट गर्नुहोस् ताकि यसले तपाईंलाई रातमा अत्यधिक उत्साहित बनाउँदैन।
सामान्यतया, बेडरूमको पेन्ट र colors्गमा कुनै अध्ययन छैन जुन स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिमा र color्गको प्रभाव फरक हुन सक्छ। तैपनि, र calm्ग छनौट गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई शान्त र आरामदायक बनाउँदछ ताकि तपाईं निद्रा विकारहरूको अनुभव न गर्नुहोस् र तपाईंको स्वास्थ्य पनि अवरोध हुनेछैन।
र taste्ग स्वादसँग धेरै सम्बन्धित छ त्यसैले सबैलाई निश्चित रूपमा बिभिन्न विकल्पहरू छन्। यदि तपाईंलाई मनपर्दो र। रंगमा समावेश गरीएको छैन भने जसले आरामदायी भावना सिर्जना गर्न सक्दछ, अन्य कोठाको गहनाहरूको छनोटमा समायोजन गर्नुहोस्। शान्त र colors्गले हावी हुन सक्दछ, तर यसको मतलब यो होइन कि कोठामा बाँच्न सक्ने अन्य र colorsहरू हुनुहुन्न। त्यसो भए, तपाईंको बेडरूम रंग योजनाहरूको सर्वश्रेष्ठ संस्करण अन्वेषण गर्नमा रमाउनुहोस्!